Gudoomiye Cabdiqani Saciid Carab iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Gaaray Magaalada Moscow | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Gudoomiye Cabdiqani Saciid Carab iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Gaaray Magaalada Moscow
Published on June 11, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(11-6-2018) Madaxwaynaha xiriirka kubbada cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka Ruushka oo afar maalmood kaddib ka furmi doono koobka adduunka.
Cabdiqani iyo xertiisa ayaa degi doona Hotelka caalamiga ah ee Crown Plaza halkaa oo hooy u ahaan doonta madaxda Xiriirada ciyaaraha oo idil.
Ujeedkaa uu halkaa u tagay iyo howsha uu Cabdiqani Saciid Carab ka qaban doono Koobka Adduunka ayaa ah in goor hore ay FIFA u magacowday Xubin muhiim ah oo ka tirsan Guddiga qaban qaabada ee dhacdada ugu wayn ciyaaraha adduunka.
Kabtankii Inter Milan iminkana ka mid ah maamulka sare ee kooxdaasi Javier Zanetti ayaa ka mid ah shaqsiyaadka ay wada shaqeyn doonaan Cabdiqani maadaama uu isna yahay Xubin ka tirsan Guddiga qaban qaabada.
Koobka aduunka ayaa 14 ka bishaan ka furmi doona dal qaboobaha Ruushka waxaana lagu Casuumay inta badan Xiriirada Kubada cagta ee ka diiwaan gashan FIFA halkaa oo ladoonayo in ay Goob ka ahaadaan Xaflada Furitaanka koobka aduunka 2018.